Ngoko, uJanuwari 20 weza-umhla wokuvulwa kukaDonald Trump. Ukutsho ukuba ukunqoba kwe-billionaire okhethwe ngumongameli wase-US kwakungalindelekanga, oku akutsho nto. Ukutshatyalaliswa kweTrump kwakubangelwa ngokwenene kubachasi bakhe, kwaye akukho nto inokutshatyalaliswa kwabo babenomdla kunye nompolitiki wokuqala.
Emva koonyulo lukazwelonke lwanamhlanje, iMelika ayiyi kuba yinto efanayo - uluntu lwahlula phakathi kweenkampu ezimbini: abanye bayakuvuyela inkokeli entsha, abanye abanako ukuwamkela iziphumo zokuvota. Akukho ngaphantsi, kwaye mhlawumbi nangakumbi, inomdla ngumfazi kaDonald Trump, uMelanya. Kakade ngeli phulo likaMelania lazama ukudibanisa kwiimidiya ezithintekayo kwiifomu zeefotoboti ezifanelekileyo.
Nangona kunjalo, kubonakala ukuba ubungqina obuthathakayo budlalwa kuphela kwizandla zomongameli wexesha elizayo - kunzima ukufumana phakathi koMfazi waseMelika waseMelika owodwa onokugqithisa ubuhle bomfazi onomdla we-billionaire.
Ingubo eluhlaza okwesibhakabhaka kaMelania Trump kwindlu yokuvulwa yayivuyisa uluntu ngobuhle
Enye yezinto ezibaluleke kakhulu zokusungulwa komhla we-45 kaMongameli wase-US kwakuyimpahla eyenziwa ngumfazi kaDonald Trump. Emva kokuba saziwa ukuba iMelania yayiya kuba nguMtshakazi wokuqala we-USA, ezinye izindlu zeteknolo zithi zingayi kubhinqa umfazi we-billionaire.
Ukubonakala kwanamhlanje kaMelania Trump ekuvusweni komyeni wakhe kwisambatho esineqabileyo ebomvu ephethe ibhatyi sele sele kuqatshelwa yiingcali zefashoni njengehambo elungileyo. Isitalelo esiqinileyo seengubo kunye nezinto ezithandanayo zikhumbuza ubuninzi besitayela sikaJacqueline Kennedy.
Umbhali wengubo uMelania Trump yokuvulwa kwaba nguRalph Lauren. Kubonakala ngathi kwikamva elizayo i-brand Ralph Lauren iya kuba yinto ehloniphekileyo kwimveliso yefashoni.
Abanye abaqulunqi bemveli, ngendlela, bathuthumele ukwenza ingxelo malunga nenkxaso ye-First Lady. Ngoko, uStefano Gabbana noDomenico Dolce, uKarl Lagerfeld, uTommy Hilfiger balungele ukunikela ngeenkonzo zabo eMelania Trump. Owesibini uthi ukugqoka uMelania Trump kukunqoba kwanoma yimuphi umyili.
U-Alina Kabaeva wabonakala esidlangalaleni kunye nomyinge wokubandakanya
Abafaki bakaPavel Priluchny baxoxe ngokukhulelwa kwesithathu kuka-Agata Muceniets, ifoto
I-tomato sauce kunye ne-carrots kunye nesiliva
Izingoma ezintsha zeKaty Buzhinskaya
URadik Guschin wavuma ukuba wayengazange azi noZhanna Friske
Ummeli wentsapho uJeanne Friske ubeke amazwana ngamalungelo kaDmitry Shepelev kwilifa
Cosmetics kubafazi abakhulelweyo
Kutheni umntwana esoloko ehlupheka: izizathu ezintathu zezifo ezingapheliyo